တဖက်လူက သင့်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈)ချက် - Lifestyle Myanmar
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို မကြိုက်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရတာလောက် ကြေကွဲစရာကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က သူ့ကို တကယ်ကြိုက်နေချိန်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကို မသိတာထက် သိလိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သိလိုက်ရတော့ သူတို့မလိုချင်တဲ့ relationship တစ်ခုအတွက် သူတို့နောက်ကို တကောက်ကောက် ဆက်လိုက်နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို ကိုယ့်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူပေါ်မှာပဲ ဖြုန်းတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေ အလဟဿဖြစ်မှာကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့နိုင်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို မကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ သူတို့ဘက်က စကားစပြောတာမျိုး မရှိပါဘူး
သင့်ကိုကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်က သင်နဲ့စကားပြောချင်မှာပါ။ ခပ်အေးအေးနေတတ်သူတွေကလွဲရင် သင်ကြိုက်တဲ့သူက သင့်ကို အရင်စာပို့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သင့်ကို ဖုန်းခေါ်တာမျိုး၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ပို့တာမျိုး လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ စကားပြောချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က စကားစပြောရမယ့်သူ အမြဲဖြစ်နေရင် ဒါက သင့်ကို သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
၂။ သူတို့က စကားဝိုင်းကို မထိန်းသိမ်းပါဘူး
သင့်ကို ကြိုက်နေသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်နဲ့စကားစမြည် ပြောချင်ရုံသာမက သူတို့က ဒီပြောဆိုမှုကို ဆက်ထိန်းထားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်း မေးရင် သင့်ကို စီကာပတ်ကုံး ပြောပြပါလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ သင်ရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်းပါ ပြန်မေးပါလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ထိုခံစားချက်တွေကို မမျှဝေတဲ့သူတွေဟာ သင့်ဆီကနေ နောက်ထပ် ဘာစကားပြောဆိုမှုမှ မလာအောင် ဆက်မေးလို့မရတော့မယ့် အဖြေသာ ပေးတတ်ပါတယ်။
၃။ သူတို့က အမီလိုက်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး
ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အခါ သူတို့ကို မြင်ချင်တွေ့ချင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ၊ အဲဒါကို ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ပူနေပါစေ ကိုယ်တကယ်သဘောကျနေရင် အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ကို တွေ့ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သင့်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ သူတို့က သင့်ကို မတွေ့ချင်ဘူးပြောဖို့ ယဉ်ကျေးလွန်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေအမြဲပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆင်ခြေတစ်ခု၊ နှစ်ခုက ခိုင်လုံနိုင်ပေမယ့် ဒီထက်ပိုလာရင် သူတို့က သင့်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာ သေချာနိုင်ပါတယ်။
၄။ တခြားလူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ မကြိုးစားပါဘူး
သင်ကြိုက်နေတဲ့လူက အခြားသူတွေနဲ့ ချိန်းတွေ့နေပါသလား? သူတို့က ဒီအကြောင်းကို သင့်ရှေ့မှာတင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး ဖုံးကွယ်ဖို့ မကြိုးစားဘူးလား? ဒါဆိုရင် သတိပေးချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က အခြားသူတွေနဲ့ ချိန်းတွေ့ရင် (ဒါမှမဟုတ်)သင့်ရှေ့မှာ တခြားသူတွေနဲ့ ပရောပရည်လုပ်နေရင် အဲ့ဒါက သင့်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ သင့်ကို အချစ်ရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်လို့တောင် မမြင်ဘူးလို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
၅။ သူတို့က သင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဂရုမစိုက်ပါဘူး
လူတစ်ယောက်က သင့်ကို သဘောကျတဲ့အခါ သူတို့က သင့်ရဲ့သာယာလှပမှုကို ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းတွေ့တယ်၊ ချိန်းတွေ့ပြီးနောက် ညဘက်မှာ ကားနောက်ကျလို့ လမ်းလျှောက်ရမယ်၊ သင့်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောကျ်ားအများစုက သင်နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့နည်းတူစွာ သင်အိပ်ပျော်နေတာကို သိရင် သင့်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူက သန်းခေါင်ယံမှာ စာမပို့ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ မကြာခဏ ပျက်ကွက်နေတယ်ဆိုရင် ဒီလူက သင်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဂရုမစိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ သူတို့က group setting ထဲမှာ သင့်ကို ဘယ်တော့မှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး
အဖွဲ့ထဲမှာ သင့်ကို ကြိုက်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပါစို့ ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝိုင်းပြီး ဆွေးနွေးရတာတို့ ပါတီပွဲတို့ဆိုရင် အဲဒီလူက သင်မကြည့်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အခါ သင့်ကိုမကြာခဏ စိုက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သင့်ကို သိမ်မွေ့တဲ့ပုံစံနဲ့ သင့်နောက်က လိုက်နေသလို သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါ်လာတတ်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကိုကြိုက်တယ်၊ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေချင်တယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ စကားပြောလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါ။ သင့်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်ကို အဖွဲ့ထဲမှာ ရှိတယ်လို့တောင် ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၇။ သူတို့က သင်စကားပြောတဲ့အခါ နားမထောင်ပါဘူး
သင့်ကိုကြိုက်နေတဲ့လူဆိုရင် သင်စကားပြောတဲ့အခါ နားထောင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မှတ်မိနေတတ်ပြီး သင်ပြောသမျှကို မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ခံစားချက်မရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သင်ပြောသမျှကို မစီမံနိုင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်စကားက သူတို့အတွက် သိပ်ထူးခြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၈။ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေက သင့်အကြောင်း မကြားဖူးပါဘူး
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ခဏတာတွဲနေပေမယ့် သူတို့က သင့်အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေကို မပြောပြခဲ့ရင် ဒါက ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် သူတို့က သင့်ကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲသွားဖို့အထိ မရည်ရွယ်ဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သို့သော် ဒါက သူတို့ဟာ တဖြည်းဖြည်းရွေ့ရတာကို နှစ်သက်တယ်လို့လည်း ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကို မိတ်ဆက်မပေးချင်သေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ လူတွေဟာ သူတို့ကြိုက်တဲ့သူကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးဖို့ အနည်းဆုံးတော့ ထုတ်ပြောပါလိမ့်မယ်။